Aasaasaha Amazon iyo xaaskiisa oo isfuraya 25 sano kadib oo ay is qabeen… – Hagaag.com
Aasaasaha Amazon iyo xaaskiisa oo isfuraya 25 sano kadib oo ay is qabeen…
Aasaasaha Amazon Jeff Bezos iyo xaaskiisa MacKenzie Bezos ayaa isfuraya ka dib 25 sano oo ay wadajireen, Lamaanaha ayaa bayaan wadajir ah ku sheegay barta Twitterka.
Mr iyo Mrs Bezos ayaa kulmay markii ugu horeysay iyaga oo ka wada shaqeynayay sanduuq maalgashiga New York horaantii 1990-maadkii, isla markaana ay wadajireen tan iyo markii Amazon qiimaheedu uu ku dhowaaday $ 1 trillion sannadkii hore, taas oo kor u qaadeysa rajada ah in heshiiska furiinka uu ka dhigo haweenayda ugu qanisan caalamka.
Iyadoo saamiga shakhsiga ah ee Amazon lagu qiyaasay inuu yahay $ 160bn (£ 125bn), Mr Bezos oo 54 jir ah ayaa ah ninka ugu hantida badan dunida. Inkasta oo kala-guurka uu yahay mid saaxiibtinimo, hadana kala-guurka ay u badan tahay inay caddeeyaan inuu yahay mid aad ugu faa’iido badan qareenada iyo la-taliyeyaalka.
Lamaanahan ayaa waxay is guursadeen 1993, hal sano ka hor markii Mr Bezos uu ka bilaabay Amazon maqaasiin Seattle ku yaallo.
Sidoo kale saamiga uu ku leeyahay Amazon, Bezos wuxuu leeyahay hanti maalgelin kale iyo sidoo kale guryo magaalooyinka Seattle, Washington DC, Beverly Hills, New York iyo Gulfstream jet.
“Ka dib markii muddo dheer aan raadinay ama sahaminay ama tijaabinay furiinka, waxaan go’aansanay inaan is furno oo aan u sii wadno nolosheena si saaxiibtinimo”. Mr Bezos ayaa boggiisa Twitter sidaasi ku qoray.
MacKenzie Bezos, oo 48-jir ah, ayaa ah qof qorta sheekooyinka oo ku soo kortay San Francisco, waxay kaloo tahay aasaasiha urur ka soo horjeeda isu-xoogsheegashada.
Lamaanahan ayaa kulmay bilowgii 1990-yadii, Waxay is mehersadeen seddax bilood ka dib markay wada shaqeeyeen hadana sidoo kale seddax bilood kadib wey is guursadeen. waxay leeyihiin afar caruur ah.
Warka furitaanka ayaa imaanaya laba maalmood ka dib markii Amazon uu noqday shirkada ugu qiimaha badan caalamka, taasoo ka sarreysa qiimeynta Microsoft.
Amazon waxay hadda leedahay kharash suuqeed dhan $ 811.2bn, iyada oo falanqeeyayaasha ayaa tilmaameen in ay gaari karto hal Trillion oo dollar.